किन हुन्छ स्वास्थ्य चौकीमा औषधी अभाव ? – Hamrosagarmatha.com
किन हुन्छ स्वास्थ्य चौकीमा औषधी अभाव ?
स्वास्थ्य संस्थामा औषधी अभावको समस्या सधै रहने गरेको छ । यो वर्ष पनि स्वास्थ्य संस्थामा औषधीको अभाव भएको र यससम्बन्धी गुनासो केन्द्रसम्म नै पुगेको देखिन्छ । नेपालको संविधान
२०७२ को भाग ३ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा
३५ को उपधारा १ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क
रुपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन”
भन्ने उल्लेख छ । यसअनुसार जनताले सामान्य खालका रोगहरु लागेमा पाउने सामान्य
आधारभूत तहको उपचार निःशुल्क पाउनुपर्ने हो । तर आधारभूत तहको
उपचारका लागि चाहिने अत्यावश्यक औषधी नै सधैं अभावको चपेटामा पर्ने गरेको यथार्थ
त्यस्तै, धारा ३५ को उपधारा २ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । यस हिसावले स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सक र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले जानकारी दिनुपर्ने हो । तर, यो नेपालीको लागि आकाशको फल जस्तै भएको छ।
यसैगरी उक्त धाराको उपधारा ३ मा “प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको
हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । तर, सबै नागरिकले साँच्चै स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ?
स्वास्थ्य सेवा शहरमा बस्नेले मात्र होइन विकट गाउँको कुना काप्चामा बस्नेले पनि समान
रुपले पाउनुपर्ने हो । प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाहको मूलभुुत उद्धेश्य पनि यही हो ।
धारा ३५ को उपधारा ४ मा “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको
हक हुनेछ” भन्नेजस्ता कुराहरु मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । तर, के संविधानमा उल्लेख
भए झैं सर्वसाधारण जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ? प्रश्न गम्भीर छ । स्वास्थ्यमा
विभिन्न खालका विकृतिहरु छन् जसमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सधैं औषधीको अभाव भइरहनु एक
समस्या हो । आखिर स्वास्थ्य संस्थामा औषधी अभाव किन हुन्छ त ? औषधी खरीदको
लागि पहिलाको प्रक्रिया कस्तो थियो र हाल स्थानीय तहमा औषधी खरीदको समेत अधिकार
गएपछि औषधी खरीद तथा वितरण प्रक्रिया कस्तो छ भन्ने विषयवस्तुमा यो आलेख केन्द्रित
सरकारले नेपालको संविधान २०७२ ले तोकेको व्यवस्था अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई प्रदान गर्ने भनी विभिन्न खालका अत्यावश्यक आधारभूत औषधीहरु सरकारी स्वास्थ्य
संस्थामार्फत निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा ३५
किसिमका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य संस्थाको तहअनुसार यस्ता निःशुल्क
वितरण गर्ने औषधीहरु ७० वटासम्म पु¥याएको छ । यसरी निःशुल्क रुपमा वितरण
गरिने त्यस्ता औषधीहरुको सूची स्वास्थ्य संस्थामा टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर,
ती ३५ वा ७० प्रकारका सबै औषधीहरु कहिल्यै पनि स्वास्थ्य चौकीमा देख्न नपाइएको
जनगुनासो छ । कम्तीमा अत्यावश्यक औषधी भनी सूचिकृत गरिएका औषधीहरु मात्र
भएपनि नियमितरुपमा स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध भएमा जनताले ठूलो राहतको अनुभव गर्ने
थिए । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थामा औषधी अभाव हुनुमा सरकारले
छुट्टयाएको रकम अभाव एउटा कारण भएपनि त्यो भन्दा जटिल र वास्तविक कारण भने अन्य छन्
खासगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आपूर्ति हुने औषधीहरु पहिला केन्द्र स्तरमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा
क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र जिल्लामा जिल्ला जन÷स्वास्थ्य कार्यालयबाट खरीद गर्ने गरिन्थ्यो भने
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरुमा समेत केही रकम विनियोजन भइ ती
निकायहरुबाट समेत खरीद गर्ने प्रचलन थियो । यीबाहेक बेलाबखत विभिन्न खालका दातृ
निकायहरुबाट समेत सहयोग स्वरुप औषधी तथा उपकरणहरु वितरण गर्ने काम हुन्थ्यो ।
हालसम्म पनि करीब यस्तै भइरहेको अवस्था छ । अब स्थानीय तहको समेत गठन भइसकेको
सन्दर्भमा चाहिं बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएपछि स्थानीय तहहरुले नै औषधी
खरीद गर्ने अख्तियारी पाएका छन् ।
औषधी खरीद गर्दा टेण्डर आव्हान गरी कागजी प्रक्रिया पुरा गर्ने गरिन्छ । यस क्रममा जुन कम्पनीले कम दरभाउमा टेण्डर हाल्छ, उसैको टेण्डर स्वीकृत हुने प्रचलित नियमलाई अनुसरण गरिन्छ । यसो गर्दा सरकारी नियमानुसार औषधी खरीद त हुने तर त्यसक्रममा विभिन्न किसिमका चलखेल हुने
कुरा कुनै नौलो होइन । जस्तैः कम प्रचलित खालका कम्पनीहरुको औषधी सस्तो दरभाउ
गराई स्वीकृत गर्ने । अनि कमिसनको लोभमा ठूलो परिमाणमा औषधी खरीद गर्ने
। कम्पनीको गोदाममा भएका म्याद नाघ्नै लागेका औषधी खरीद गर्ने र थप कमिसन खाने
समस्या देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा खासै खपत नहुने अनावश्यक खालका औषधी किन्ने गरिन्छ ।
औषधी किन्दा कुन खालका औषधी कुन परिमाणमा किन्ने भन्नेकुरामा सोंचविचार नगरी
कुन उत्पादनमा कति कमिसन आउँछ भनी हचुवाका आधारमा किन्ने परिपाटी पनि उत्तिकै छ ।
औषधीको मागको आधारमा नभई कम्पनीको गोदाममा स्टक बढी भएको आधारमा
औषधी किन्ने गरिन्छ । यसबाट थप कमिसन खाने काम हुन्छ । त्यस्तै, बढी खरीद गर्नुपर्ने
औषधीको टेण्डरमा बढी रकम राख्ने तर कम खपत हुने औषधीमा कम मूल्य राखी
टेण्डर हात पार्ने गरिन्छ । यसरी औषधी खरीद गर्दा औषधी खरीदकर्ता र औषधी
बिक्रेताबीच कमिसनको मोलमोलाइ हुने गरेको बुझिन्छ ।
यसरी किनेका औषधीहरु सरकारको गोदाममा राखेपछि अब विभिन्न जिल्लामा वा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पठाउने गरिन्छ । औषधी आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार पुस सिस्टमले होइन पुल सिस्टम अनुसार औषधी पठाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता देखिन्छ । तैपनि त्यस्तो सिद्धान्त खासै अपनाएको पाईंदैन र प्रायः हचुवा नै हुने गर्छ । यातायात तथा अन्य समस्या देखाई औषधी खरीद गर्नासाथ स्वास्थ्य चौकीमा पठाइन्न बरु भण्डारण गरिन्छ । औषधी धेरै दिन भण्डार गरिराख्दा चिसो वा आर्दताका कारण कतिपय औषधीहरु बिग्रिसकेका हुन्छन् भने कुनै म्याद नाघिसकेका पनि
हुन्छन् । यसले गर्दा म्याद नाघेका वा बिग्रिएका औषधीहरुको व्यवस्थापन गर्न समस्या मात्र
पर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा हालसालै प्राप्त भएको औषधी भएतापनि ती म्याद
नाघिसकेका हुनाले पुनः अभाव खट्किहाल्छ । एकपटक औषधी खरीद गरेपछि पुनः खरीद गर्न
अर्को तालिका पर्खनुपर्छ र टेण्डर अनि बजेटका कुराहरु आउँछन् जुन प्रक्रिया पुरा गर्न
फेरि धेरै समय लाग्छ । यसरी स्वास्थ्य संस्थामा औषधीको अभाव देखापरिरहन्छ ।
स्वास्थ्यको बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुने यस्ता विभिन्न खालका विकृति रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, केन्द्रस्तरीय अनुगमन आदि नभएका पनि होइनन् तर ती सबै फिका सावित हुँदै आएका छन् । औषधी तथा उपकरण खरीद काण्डमा मुछिएर
अदालत गएका र सजायँ पाएका व्यक्तिहरुले पनि धमाधम सफाई पाएका छन् । औषधी
प्रकरणमा यति धेरै गुनासोहरु आईरहँदा पनि आजसम्म कसैलाई पनि कठोर सजायँ भएको
पाइदैन जसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । यसका लागि कठोर खालका निति, नियम र
निर्देशिका पनि नबनेका होइनन् तर ती देखाउने दाँत मात्र भएका छन् ।
लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अख्तियारको त्रास यस्तो भयो कि कार्यालय प्रमुख र लेखापालहरुले आफू किन फस्ने भन्दै औषधी खरीद गर्ने बजेट नै परिचालन नगरी फ्रिज गराउने
काम गरे । औषधी उपकरण खरीदको टेण्डर आव्हान नै गरेनन् र औषधी तथा उपकरण
खरीदको लागि आएको करोडौं रुपैयाँ फ्रिज भई पुनः राजस्व खातामा नै फर्कियो ।
यसबाट फेरि स्वास्थ्य संस्थामा औषधीको हाहाकार मच्चियो । यो घटना केन्द्रदेखि नै
शुरु भई जिल्ला तहसम्म पनि देखियो । यसबाट औषधीको आपूर्ति गर्नुपर्ने
निकायहरुलाई त हाइसन्चो भयो तर तल्ला स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई
औषधी अभावका कारण जनआक्रोसको सामना गर्नुपरेको थियो । यसरी औषधी खरीद
गरेर सप्लाई दिएपनि औषधी अभाव सधैं भइरहने र औषधी खरीदको लागि प्रक्रिया अघि
नबढाउँदा पनि औषधी स्वतः अभाव हुने भएकोले यो दीर्घकालिन रोगको समाधान कसरी
कसले गर्ने हो कुनै उत्तर नै छैन ।
२०७४ सालमा नेपालमा स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानिय सरकारको समेत गठन भैसकेको अवस्था छ ।
स्थानिय स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानिय सरकारकै मातहतमा समेत हस्तान्तरण भइसकेका छन् । अब त स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार होला कि भन्ने जनतामा आशा पलाउनु जायज हो, तर त्यसको उचित
सम्बोधन हुन सकेको छैन । हाल स्थानीय तहलाई औषधी खरीद गर्न भनी जिल्ला जन÷स्वास्थ्य
कार्यालयले औषधी खरीदको करीब २० प्रतिशत रकम प्रदान गरेको छ । बाँकी रकम अहिले
पनि जिल्ला जन÷स्वास्थ्य कार्यालयमै राखी जिल्लाले समेत केही औषधी खरीद गरिरहेको
अवस्था छ । स्थानीय तहमै किन पुरै बजेट हस्तान्तरण नगरेको भन्ने जिज्ञासा राख्दा सबै
स्थानीय तहहरु बजेट परिचालन गर्न सक्षम नभएको, औषधी खरीद प्रक्रिया झन्झटिलो
भएको, ठूलो परिमाणमा टेण्डर गरी औषधी खरीद गर्दा स्टोरको समेत समस्या
पर्ने भएको, स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका पर्याप्त कर्मचारी पनि नभएको जस्ता आदि कारणले
गर्दा पुरै बजेट स्थानीय तहमा पठाउन नसकिएको भन्ने जवाफ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय
प्रमुखबाट पाइन्छ । हाल स्थानीय तहले पाँच लाख भन्दा कम मूल्यको कोटेशन
मात्र आव्हान गरी औषधी खरीद गर्ने गरेको कुरा कावासोती नगरपालिका नवलपुरका
स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजक विश्व कँडेलले जानकारी दिए । औषधी खरीद नियमावलीमा ५
लाखभन्दा माथिको भए टेण्डर आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण ५ लाखभन्दा कम
मूल्यको औषधी खरीद गर्दा सम्पर्कमा आएका औषधी होलसेलरहरुबाट कोटेशन
आव्हान गरी खरीद गर्न सकिने भएकोले सजिलो बाटो रोजेको कँडेल बताउँछन् । केही
औषधी अहिले पनि जिल्लाले पठाउने गरेको र केही आफैं खरीद गरी वितरण गर्दै
आइरहेकोले खासै समस्या नपरेको कँडेल बताउँछन् । अब जिल्लास्थित जन÷स्वास्थ्य कार्यालय
समेत खारेजीमा पर्ने भएपछि सबै काम र प्रक्रिया स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने र यसो गर्दा
तत्कालका लागि पर्याप्त कर्मचारी, भौतिक साधन स्रोत र प्राविधिक समस्या पर्ने कुरा निश्चित
अन्तमा, स्वास्थ्य एउटा त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो जहाँबाट सम्पादन हुने काम कारबाही तलमाथि हुनासाथ सिधैं जनस्वास्थ्यमा असर पर्दछ । त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजनलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्दछ । पर्याप्त औषधी खरीदको लागि बजेट विनियोजन गर्ने र समयमै सबै प्रक्रिया पुरा गरी औषधी खरीद गरिहाल्नुपर्छ । औषधीको मौज्दात् र मागलाई समयमै
विश्लेषण गरी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने खालका औषधीहरु खरीद गर्नुपर्छ ।
औषधीको लागि मात्र औषधी खरीद नगरी गुणस्तरीय औषधी तथा उपकरणहरु खरीद
गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो स्थानीय तहमा देखापरेका स्वास्थ्य समस्या र समाधानका
प्रक्रिया स्थानिय प्रमुखलाई अवगत गराई नीतिगत समस्या भए गाँठो फुकाउने काम
गर्नुपर्दछ । अनि आफ्ना मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र
नियमित औषधीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने केही हदसम्म भएपनि स्वास्थ्य
संस्थाहरुले अग्रगति लिन सक्नेछन् ।
(लेखक पाण्डे सेवा निवृत्त जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन् )
शाश्वतधामः हिन्दु तथा बौद्ध धर्मको साझा धरोहर